Itai 10,000 + Sugar Mama's & 60,000 + Shura Vana pasina! Isai ikozvino
Free Website Sugar Momma
Menu uye Widgets
Zvirongwa Zvakavanzika & Dhara Dating
Login uye Kutanga Kutsvaga Shuga Baby Arrangement
100% pasina shuga amai chikafu site
Nzira Yokuwana Nayo Momma Yemafuta Pamusana pe Craigslist?
Kudanana Mazano Kune Vakadzi Pane 40
Nzira Dzokuudza Kana Wakagadzirira Kuramba MuDating Season Season zvakare
Sugar Mamas Kutsvaga Sugar Babies / Sugar Boys
Zvikonzero Zvaunoda Kuti Uve Nezuva Mukadzi Akwegura
Ebenezer kofi sam on Sugar Babies Kutsvaka Kugadziriswa na Sugar Mamas!
Jaden on Sugar Babies Kutsvaka Kugadziriswa na Sugar Mamas!
HSC - Admin on Sugar Babies Kutsvaka Kugadziriswa na Sugar Mamas!
Mukuru waunowana, zvakanyanya kuoma kuti uwane mumwe munhu waunofunga kuti unogona kuwirirana naye. Kunyange zvazvo shuga amai webhusaiti yepaiti webhusaiti ine ruzivo rwakasiyana-siyana, asi dzimwe nguva rinoratidzika seusina kuwana chero musoro.
Zvichida iwe wakarambana, wakagumbuka uye zvishoma kuti uwane mutambo wezvaunofarira. Heano zvimwe zvehutano hunokosha hwekufambidzana kune ani zvake mushure me40;
Kufambidzana neIndaneti ndiyo tsika nhasi
Zvishoma nezvishoma hazvidikanwe kuputsa hurukuro mupaki yemharaunda kana pa bar inotungamirira kune chimwe chinhu chinokosha. Nei zviitiko zvakadaro? Nokuti munhu wose ari paIndaneti. Sugar momma online portal inogona kubatsira zvakanaka kana iwe uri mutsva kuInternet dating.
Tora kufambidzana kwako
uri mumiriri wako 40 uye pamwe unenge uine ruzivo rwakawanda kupfuura mumwe munhu muduku kudarika iwe. Iwe unonyatsoziva zvaunofarira uye zvisingadi uye usingadi kutamba mitambo kana kudzinga vanhu. Iwe uri kunyanya kutarisira hupenyu hwako. Saka, iwe unofanira kutora zvekufambidzana kwako zvakare.
Iva standout uye kwete kumira
Ichi ndicho chimwe chekufambisa kwakanakisisa kufambidzana kwaunogona kuwana pane shuga mama dating portal. Kufambidzana kwepachivande kwakaita zvisarudzo zvakasiyana-siyana zvevarume nevakadzi. Iva nechokwadi chekuti uri kuita chiito chekumira uye kusava kumira. Ivai neflirty asi musanamatira. Iva nechido kuziva asi usashushikana.
Ziva dambudziko rebasa
Zvakanaka kuva nenyota, asi zvakakosha kuti iwe unofanira kuziva yekutengesa zvinhu. Iye zvino hazvirevi kana iwe uchida mamwe mafirimu asi zuva rako harisi, saka iro rinopesana. Funga nezvezvimwe zvinooneka zvinoita kuti urege kunakidzwa mukudanana uye kuziva nguva yekudzoka.
Tarisa kupfuura mhando yako
Munhu wese ane zvido zvake zvepabonde uye zvaanoda. Zvisinei, paunopinda wako 40s iwe unoziva kuti unofanirwa kutarisa kunze kwekudanana kwako. Mikana ndeyekuti, unogona kuwana mumwe munhu anonyanya kufadza kuti haafaniri kufarira zvakafanana neyako asi iwe unobatana zvakanaka navo.
Pamusoro zvinotaurwa ndezvenyaya dzekufambidzana dzevanhu vari mu40 dzavo. Tariro yaunakidzwa nokuiverenga uye kutora nyanzvi yakanaka yekutora nguva yako.
Posted on September 5, 2018 September 21, 2018 munyori Harsimran KaurTags sugar mama dating, Sugar momma onlineLeave mhinduro on Dating Tips For Women Over 40
Rimwe remibvunzo inowanzobvunzwa mukati memasangano maviri akaparadzaniswa uye akafirwa, "nguva yekutanga kufambidzanazve?"
Mhinduro kumubvunzo uyu ndeyekuti, "Ndizvo chete apo iwe unokwanisa kuita chisarudzo chakakwana."
Pasi pezvinyorwa ndiwo nzira dzaunogona kutaura nadzo, iwe kana usati wagadzirira kubvongodza zvakare;
1. Iwe wakadzorera muviri wako, pfungwa, uye mweya.
Kungofanana nayo kana kuti kwete, asi mumwe anofanira kutora kuti awanezve hukama hwekare kuitira kuti adzivirire ivo pachavo. Kana waita izvi, Sugar momma dating site yakagadzirira kukushandira nemitambo yakawandisa inobva pane zvaunofarira. Zvisinei, iwe unofanirwa kutora kubva kune wakarambana kana "wakafa" mudzimai wako kutanga.
2. Kukwana kusava nehanya.
Rudo uye ruvengo hazvipikisani. Vane chimwe chinhu chakafanana - manzwiro. Kunyanya kusina manzwiro ndiko kunonzi kusava nehanya mupfungwa. Chaizvoizvo, kana iwe usingafungi chero rudzi rwekushamwaridzana kwepfungwa kune zvakaitika kare, chimbofunga kuti iwe wakagadzikana chaizvo kugadzirira kufambidzana.
3. Iwe unofara uye une nguva yakakura.
Ichi ndicho chimwe chekuoma kubudirira asi chikamu chakakura chinouya nenguva. Yeuka, nguva inoporesa maronda ose. Iwe hausi kunetseka kana kusuruvara zvakare. Iwe unonakidzwa nokuva nenguva yakawanda muboka revanhu vako uye mapoka ejokes anoita kuti munhu wose aseke. Kana iwe uchinzwa zvakafanana, iwe wakagadzirira kupedzana.
4. Iwe unonzwa zviripo.
Saka, iye zvino zvaunenge usingafungi zvachose nemafungiro ako akare uye iwe usina kuzvisunungura kubva pane zvakasara zvehukama hwakapfuura - inguva yekuita. Tora shuga momma dating app uye ita zvakanaka kushandisa kwayo.
Pamusoro-kutaurwa ndezvenzira dzaungaita kuti uone kana usati wakagadzirira kudanana. Kuporesa kubva kune hukama hwekare kunotora nguva uye kazhinji nguva, inoda kushivirira uye simba. Iva nechokwadi chokuti uri kuva nepfungwa dzakanaka kuitira kuti usvetuka kutanga hupenyu hwako hwepambano. Tarisira zvinyorwa zveblogiti zvinokubatsira pakusarudza kana wakagadzirira kufambidzana.
Posted on September 3, 2018 September 21, 2018 munyori Harsimran KaurTags shuga momma dating app, shuga momma dating siteLeave mhinduro on Ways to Tell if You are Ready to Dive into The Dating Season Again
Iva nechokwadi chokuti Sugar Mamas Rudo Rwakafukidzana iwe wakafukidzira kana iwe uri kutsvaga shuga mwana / shuga mukomana kuti uwane zvinhu zvinowanikwa muhupenyu hwako kana muimba yekurara! Kana iwe uri shuga amai uchitsvaga kuti uwane 18 + shuga mwana mukomana kana wehukama hunobatsira, hukama hune rudo kana kuti kukugutsa pamubhedha, wauya kunzvimbo yakarurama.
Josh mudiki wemushuga wemakore gumi nemana 26 ari kutsvaga amai vanobudirira vanoita shuga. Iye ari mudzidzi weMasters anofarira kambani yevakadzi vakwegura uye vane ruzivo panzvimbo yevasikana vaduku vane dambudziko rakawandisa remweya uye haana kunyara pamusoro paro. Anotitaurira kuti anonyanya kufarira uye anofarira kuongorora zvitsva zvitsva.
Pasinei nokuti iwe unofadza kana kwete, kune shuga mwana / shuga mukomana. Varume vanotarisa kunze kwechitarisiko chemuviri mukusarudza mukadzi uye shuga vakomana havana kusiyana. Iwe ungashamisika kuziva kuti zvimwe zvavanoda ndeye mukadzi ane ruzivo rwakawanda kupfuura ivo. Vanoda kudzidza zvinhu kubva kwamuri uye kuparadzwa newe uye mukudzoka, iwe uchagamuchira rudo rwavo, kutariswa kwega uye kutendeka.
Zviuru zvehutu hunokwezva uye hunoshushikana nevana vakomana vanoda kuve mukomana wako-chikwata uye shamwari yako vanoda kuonana newe uye kugadzirisa upenyu hwako hwe rudo zvakare zvakare Bhalisa nhasi kuti ugochinanise mharidzo nemifananidzo pamwe navo pamusoro pewebsite yedu kana Android app on Play Play. Sangano redu rekushandura rinoenderana nekusarudza kutsvaga richakutungamirira kune shuga vakomana vanonyatsopindirana nezvinodiwa uye iwe unokwanisa kutarisa ivo musingazivikanwi musati mavaita muVhidhiyo uye Audio chat options.
Haufaniri kunyange vanofanira kusimbisa nezvazvo nokuti, pano, unogona kuona shuga vakomana / shuga vacheche vanoda iwe uye unogona kutora Sarudza chaunoda kubva gungwa kunofara-rudo mutoro, kumhanya, seksikäs, uye nyatsoteerera shuga vacheche / shuga vakomana. Nzvimbo yekugara neshuga inoramba ichichinja saka pane kuzviisa mukutambudzika kwekutsvaga shuga vana / shuga mukomana panguva yezvokudya zvemasikati kana kuratidza, Sugar Mamas Rudo Free unovaisa pamunwe wako.
Posted on August 9, 2018 September 21, 2018 munyori HSC - AdminTags vachitsvaka urongwa, shuga mwana, shuga vakomana, shuga mamasLeave mhinduro on Sugar Mamas Seeking Sugar Babies / Sugar Boys
Kufunga nezvekubuda kune rimwe zuva nemukadzi akwegura? Zvakanaka, usazvipa pfungwa yechipiri uye utange kuzviita. Iwe unogona kunge wakaita vakadzi vaduku muhupenyu hwako kare, zvichida avo vari mukutanga kwavo 20s. Mikana iwe ungangodaro wakagumbuka wakagumbuka, nekuda kwekusagadzikana kwepfungwa dzako pamazuva ako. Iye zvino, izvozvo hazvirevi kuti vakadzi vose vari mukutanga kwavo 20s havana kukura.
Nyaya yezvokwadi, kukura kwepfungwa hakuiti nezera - asi ruzivo. Kutaura pamusoro pazvo, hazvisi nyanzvi yekuziva kuti vakadzi vakwegura vane ruzivo kupfuura vanin'ina vavo vaduku. Hapana mubvunzo, zvakafanana zvinoenda kuvanhu. Sezvo iyi bhurosi-chinyorwa chiri pamusoro - Kuwana Vakwegura Vakadzi - ngatitaurire zvakawanda pamusoro pevakadzi pano.
Iwe ungangodaro wakanyoreswa kuWebsite yeSuar Momma uye kana zvisingaiti, iwe chokwadi uchazoguma uchinyoresa kune webhusaiti ino kana wapedza kuverenga iyi blog. Zvakanaka, ngatishandure zvakadzama mumugariro uye ona kuti sei kufambidzana nemukadzi akwegura kunonakidza.
Your Sugar Momma anoziva zvaanoda
Kusiyana nehanzvadzi dzake dzechidiki, iye anoziva zvaanoda. Akave achishandisa zvidzidzo zvose zvinokosha nekuda kwezvinetso zvaaiva nazvo muhukama hwake hwekare. Panyaya iyi, anoziva maitiro ekuzvidzivirira mitambo yemafungiro ndeye uye kuti ungadzivisa sei kusawirirana kwepabonde zvisina basa. Hazvina kutora zvakawanda kuti iwe uuove. Saka, fungisisa uye usapedza kushandisa zvese izvo zvitsvina zvepfungwa zvamave uchishandisa kushingaira vakadzi vechidiki.
Haatarisi kuva amai vako
Iye zvino, usati wabuda mukusuwa uye tanga kutora minwe yako pahwindo rako rekugadzira uye teerera shuga kamma app - heyi zvinyorwa zvishoma kwauri. Haasi kuenda kubheche iwe. Ari kutarisira iwe kuti uve wakasimba mumabasa ako uye uve nehutano hwakasimba hwaro.
Iva nechido uye unotungamirirwa
Vakadzi vanofarira kuratidzwa kune varume vane shungu muupenyu hwavo. Saka, kana iwe wakavaka kuzvikudza kwako uye chido chekutsvaka (kutsvaka kuzadzisa zvinangwa zvako), iwe uri mune zvaanoda kunyorwa. Saka, ivai muiti uye muve mutungamiri mune rumwe rudzi. Kana iwe ukaratidza hutungamiri huri mauri, hazvingatori zvakawanda kuti iwe uende naye mumaoko ako.
Iwe haungatyi kuzviita
Sezvo achiziva zvaanoda muupenyu hwake, hazvirevi zvakawanda zvekufungidzira usati wasvika kumashoko, unogona kuzviita wakachengeteka. Sugar Momma website ine zviuru zvemapurogiramu evakadzi vakwegura, vachida kushamwaridzana nevana vavo vaduku. Saka, iva nechokwadi chokuti iwe unopfeka zvakanaka uye uzviratidze nechivimbo chakakwana.
Posted on August 9, 2018 September 21, 2018 munyori Harsimran KaurTags shuga momma websiteLeave mhinduro on Reasons Why You Need To Date An Older Woman
Uri kutarisira kushamwaridzana kwepedyo neSouth African sugar mama pane WhatsApp?
- iwe wakasvika panzvimbo yakarurama.
Tinogona vanobatanidza achikumutsa akanaka, luscious, uye akapfuma South African Sugar mamas musi Whatsapp uyo huchadururira iwe rudo, hanya, zvoumbozha uye zviri yokurara chiito mhando hamuna yamboona.
Taura naYvonne kubva kuDurban uyo ari muzinda mukuru webhizimisi muzvikamu zvakawanda zveguta. Ndiye 34 uye anotarisa mukomana akanaka uye ane rudo uyo anogona kugoverana rudo rwake naye uye kushandisa mari yake.
Akave akaroorwa kamwechete asi yakazobuda yekare yekare yakanga yakabatikana zvikuru uye haina kumupa kunyatsoteerera sekuda kwaaizoita saka zvinhu hazvina kubudirira zvakanaka pakati pavo.
Saka kana uri kutarisa kuti uburuke naye, unofanirwa kuvapo kana achikuda iwe uye haufaniri kuseka nemoyo wake.
Kana iwe ukaichengeta 100% naye uye usingatengesi kuvimba kwake, iwe ungashamisika kuti iyo yakanaka sei uye yakafuma shuga amai vachakuparadza iwe zuva rega rega. Zvose zvaunoda kuita ndezvomuchengetedze anofara!
Hapana anorova kuva mbune yako South African shuga amai pamusoro whatsapp nokuti unogona kusvika naye chero nguva uchida kuti nenguva mavhidhiyo foni sunga isina hove-up Chats uye huchadururira naye rudo uye kutarisirwa sezvakangoita nairowo zvaanoita kwauri pasina kupindira kwevamwe pakati-murume.
Tine vakawanda South African Sugar Amai Whatsapp mapoka paunogona kutora Sarudza chaunoda vakadzi vakapfuma vari kutsvaga mhando rudo uye mafaro kuti zvatinogadzira hazvigoni kunyatsotevedzera zvinoita uye akanaka mukomana chete akaita unogona kupa saka kutambisa hapana nguva napaduku kuchera kuti sangana ne South African Sugar Mommies pane whatsapp uye uwane nhamba dzavo dzenhare.
Vakawanda veSouth Africa Sugar Mommies pane mapoka edu eAsapp ari kudiwa kweukama hwakakomba saka tibatane nesu kana iwe uchida kugadzirisa zvavanoda. Vakawanda vavo vanobudirira basa-vakachenjera kana kuti vave nekurambana, kana vari chirikadzi uye vakasiyiwa nefuma iyo iwe unogona kubatsirwa kubva mukutsinhana kwekutendeka kwako, nguva, kutarisa uye rudo.
Posted on July 27, 2018 September 21, 2018 munyori HSC - AdminTags chiito chokurara, amai vanoda, Chamhembe Afrika, shuga mummy dating, sugardatingLeave mhinduro on South African Sugar Mummy Whatsapp
Yakapfuma kwazvo South South sugar miami inofarira mukudanana varume vakaita sawe; Hongu iwe!
Saka tisava nenguva yekubatana nesu kuSouth Africa shuga amai vane chikwata chekuita iye zvino kuti tibatane ne shuga mamas avo vachakurovai nerudo, zvipo, mari uye kutarisirwa mukudzorera pasina asi rudo rwenyu uye ushamwari.
Meet Megan kubva kuPitoli. Haasi iye akanaka here? Megan mupfumi, anofara, uye kubuda kwekuSouth Africa amai pachikwata chedu chiri kutsvaga murume wechidiki akatendeseka uye ane rudo kuti azadzise zvaanoshuva uye kumupa kutarisirwa uye rudo.
Iye anotiudza iye akagadzirira chaizvo uye kupedza lavishly pamusoro rombo mukomana anofarirwa mwoyo wake, uye pano ndipo bhonasi muromo: kana uchigona wake kuti abvume kuti imi muri zvakanaka zvakakwana, saka kuti kunyange kuguma muwanano kana uchida .
Kana iwe uchida kugadzira shuga yeSouth Africa mamas seMegan uchifara uye uchipiwa mubayiro, iwe wauya panzvimbo yakarurama.
Kubudirira muSouth African Sugar mama dating.
Tinogona kungoenda chete kusvika kukubatanidza neyakanakisisa yekuSouth African Sugar mama kusvika iye zvino asi kubudirira kana kukundikana kweukama hwako naye huchapedzisira hunoenderana newe. Yedu South Africa Sugar amai inetsana ine shuga yakaisvonaka uye yakafuma kubva kumaguta akasiyana-siyana muSouth Africa kutsvaga hukama hwakakura pano.
Kuti ukunde mwoyo wemashuga amai vemaroto enyu kuSouth African sugar mama, munofanira kufungidzira kuti South African Sugar mamas vakadzi vakanaka vanotsvaka rudo vanogona kushamwaridzana. Havasi vasikana vaduku vamunobata semarara nemhaka yokuti vanoda rudo rwenyu.
Ramba uchiremekedza uye wakavimbika kune yako South Africa Sugar mama uye mibayiro yako haizomboregi kupfurikidza. Yeuka, kubiridzira kune dzimwe mhandara paunenge uchidanana neshuga mama wako mukuru. Saka ramba wakananga naye uye usasvibisa mwoyo wake nokuti kana akanzwa chiratidzo chiduku chekubiridzira, vimba iwe, iwe ucharasikirwa naye uye zvose zvaanofanira kupa. Usagara pafoni yako nguva dzose apo iwe unayo. Muchidimbu, ingomuraira iye nerudo, kutarira uye zvinhu zvekuvata chiito nguva dzose.
Posted on July 27, 2018 September 21, 2018 munyori HSC - AdminTags kufambidzana varume saiye, South African, shuga mamas, Vakapfuma zvikuruLeave mhinduro on South African Sugar Mommy Dating
Ndiani anoti iwe haugoni kuwana shuga yeSouth Africa mummy yezviroto zvako pa Facebook?
Zvakanaka, taura munhu iyeye kuti iye haana kururama nokuti, sechinhu chaicho, vazhinji vakapfuma uye vakapa muviri weSouth Africa shuga mamas vari ku-Facebook vachitsvaga vakomana vakatendeseka, vane rudo uye vakanaka kuti vavade sezvavari kuda kudiwa.
Zvinokufadza iwe kuziva kuti hausi iwe chete unotsvaka South African sugar mama pane Facebook yaizokuda uye kutarisira zvose zvaunoda. Kutaura zvazviri, manzwiro acho ndeavo nokuti vazhinji vane ruzivo uye vakapfuma shuga yeSouth Africa mamas pa Facebook variwo vanotarisa vashandi uye vashandura majaya kuti vadzivirire kubva kune kusurukirwa uye kuvagutsa pamubhedha nguva dzose.
Kiki i South African sugar mama pane Facebook. Anogara muWestern Cape uye ari kutsvaga musikana akanaka, ane rudo uye akatendeseka kuti aende pasi pose naye.
Akanga aona ruzhinji rwekutengesa kubva kumukomana wake ane shuga munguva yakapfuura uye iye zvino ari kutsvaga murume ane pfungwa dzakakomba asingazombengeri.
Anoronga uye anotarisira zviitiko zvakawanda zvepamusoro-soro munyika yose uye haana kunyara kushandisa mari yake kwauri kana iwe uri mukana wenhaka.
Zvose zvaanokumbira ndezvokuti iwe unomuputira norudo uye kutarisa, ramba wakavimbika uye uchimugutsa mumubhedha.
Kana uri kushamisika kuti nei usingakwanisi kuwana akakwana South African sugar mama pane Facebook, zvino, unoda kuziva kuti kune mukana wehutu kuti kune chimwe chinhu pamusoro pekufamba kwaunoita kana kuti kubatana navo izvo zviri kuisa .
Kutanga, zvakakosha kuti iwe uite pfungwa yakanaka uye yenguva dzose yekutanga uye unofanirwa kuve nechokwadi kuti hauna kuuya sechinhu chinotyisa. Hungu, shuga yedu yeSouth Africa mamas pa Facebook inoziva kufarira kwaunoita mukati mavo asi iwe unofanirwa kuchengeta iyo classy uye kuiita yakanakira.
Tweak purogiramu yako kuitira kuti iite hupenyu uye inotakura mitoro yemifananidzo yako yakanaka zvakare. Kana iwe uchitevera matanho aya uye ugare wakatendeseka munzira yose, iwe uchava neSouth African Sugar mama yako kubva paIndaneti pasina nguva. Tinogonawo kukubatanidza kukutorera iwe neSouth African sugar mamas pa Facebook kana uchida.
Posted on July 27, 2018 September 21, 2018 munyori HSC - AdminTags Facebook, fb boka, mummys, shuga mwana, shuga mummyLeave mhinduro pa South African Sugar Mummy Facebook
South African Sugar Mama Mafoni Nhamba
Kuva nefoni yako yeSouth African sugar mama ndiyo nzira yakasimba yekukurumidza kushamwaridzana uye kuramba uchikurukura naye nguva dzose. Vimba neni, mukadzi wose anoda kutarisirwa, uye rakanaka uye rakapfuma South African Sugar mamas haisi yakasiyana. Nekuda kukurukurirana uye vhidhiyo inoshevedza pamusoro peInternet inogona kuva inonakidza, pane dzimwe nguva apo izvo zvekuSouth Africa amai vako vanoda chaizvo ndeyokunzwa inzwi rako pamusoro pefoni nguva dzekupedzisira nokuti inzwi re baritone rinoita kinky zvinhu kumuviri wake.
Tine database yakazara izere nhamba dzefoni dzemuSouth African mamas kuti iwe usarudze kubva panzvimbo yekutsvaga nekusingaperi kuburikidza neInternet kutsvaga nhamba dzefoni dzehupfumi uye shuga yakanaka mamas. Dzokai nesu nhasi uye tive nekuwana nhamba yefoni yeSouth African sugar mama iyo ichazadzisa mafungiro ako ose uye kurota, uye kutarisira mari yako.
Helen ndeimwe yeSouth African sugar mamas pane database yedu. Iye anogara muGoli uye anomhanya ane michina yekugadzira michina ine matavi mumaguta akasiyana muSouth Africa. Helen ari kutsvaga musikana mumwe chete ane rudo uye ane ruzivo rwakanaka rwemashoko. Anoda kuti tigovere nhamba yake newe asi anotsigira kuti iwe unofanira kunge uri pamubhedha kuti uwane mwoyo wake uye ari kuda kubhadhara mari yako yekufambisa kunyange iwe hausi ikozvino kuSouth Africa.
Kubatana naHelen uye dzimwe South South Sugar mamas kuburikidza nendima dzavo dzefoni kana iwe uri mubhokisi nesu tiri chimedu chekeke. Takapa zviuru zvemashamba eSouth African sugar mamas 'kune vakawanda vane shuga munguva yakapfuura uye zvinhu zvakashanda zvakanaka pakati pavo nokuti tinogara tichitaura zvakanakisisa.
Kuti uite kuti iwe kubudirire muhukama hwako neSouth African sugar mama, nguva dzose rangarira kuti inyoreswe uye inoseka mukubata kwako kose naye. Nguva dzose ramba uchiremekedza uye wakanaka uye usauya sechinhu chinotyisa paunoswedera kwaari. Kana iwe ukaita izvi uye uchitevera mamwe mazano atinokupa, vimba neni, iwe uchararama hope dzako ne South African sugar mama iwe nguva.
Posted on July 27, 2018 September 21, 2018 munyori HSC - AdminTags foni nhamba, Chamhembe Afrika, shuga mwana, shuga mamaLeave mhinduro pa South African Sugar Mama Phone Numbers
Nzira Yokudzivisa Kuparadza Zuva Rako: Nhungamiro Inokosha
Uri kutarisa kufadza uye kutarisira mutauro pane shuga momma website? Kana hongu, iwe ungada kuongorora mamwe makadhiiniti emitemo iwe usingadi kukanganwa. Zvechokwadi, kune zvakawanda zvakanaka zvekufambidzana mazano maunogona kuwana kubva kune unyanzvi hwokufambidzana, asi "don'ts" ndiyo inonyanya kukosha. Iyi blog ichakuvhenekera pamusoro pezvimwe zvemashoko anokosha maererano, "chii chisingafaniri kuitwa" musi wako wokutanga. Mazano ataurwa mu blog anokunyeverai pamusoro pechirume chakaipa chekufambidzana, kuti iwe haumbodi kuongorora.
1. Usauyisa wako wekare
Chimwe chezvikanganiso zvakakura zvaunogona kuita uye zvakare nezuva rekutanga ndechokuti, unotaura nezvekare wako. Icho chikuru chivhara zuva rako. Iye, hongu, akapfekedzwa zvakanaka uye zvichida akatengwa angave imwe yemafuta anodhura kupfuura kungokufadza iwe. Zvisinei, iwe unounza nheyo nyaya yekare yako-inogona kuparadza kufamba kwakanaka kwezuva racho. Zvakakosha kuichengetedza chiedza pakutanga uye kuchengetedza cheery kufamba kwezvakatipoteredza. Saka, kuunza wako wekare muhurukuro ihuru-HERE.
2. Dzivisa kuva nekuputika
Kunwa kunofanira kudziviswa pamutengo wose panguva yekutanga, zvisinei, kana mamiriro acho asingadziviriki - zviri nani kuenda nezvishoma. Kunyanya kudhakwa kunogona kukukanda mumamiriro ekurara uye kukugumisa kuchikandira. Sezvavanotaura, pfungwa yekutanga ndiyo pfungwa yekupedzisira. Iwe zvechokwadi hausi kuda kuratidzira kufungidzira kuti iwe haugoni kudha doro. Kune vakadzi vakawanda, vakamirirai pane shuga momma webhusaiti uye iwe zvirokwazvo haunzwisisi mikana yako. Saka, zviri nani kudzivisa mamiriro ezvinhu akadaro.
3. Usataure zvakawanda nezvako
Akambonzwa, "unovachengetedza nyota uye vacharamba vachidzoka kuzhinji"? Iye zvino, izvo hazvirevi kuti iwe unoda kutamba mitambo nezuva rako. Zvisinei, iwe haungadi kuzarura zvinhu zvose pamusoro pako pazuva rokutanga. Kuva mutereri akanaka, kune rumwe rutivi, kunonyanya kutarisa kwauri. Izvo hazvingokuregi kukuzivisai nezvezuva rako asi zvinokupawo pfungwa, kana iwe uchida kuisa rimwe zuva kana kuti kwete.
4. Dzivisa kushandisa foni
Kana iwe uchiramba uchitsvaga foni yako uye uchitarisa chero chiziviso chimwe chete chauri kuwana pane zvemagariro ako evanhu, zvingaita kuti zuva rako rive nemafungiro kuti hauna kufarira. Mikana ndeyokuti, shuga yako momma haigoni kuigadzirisa uye haizombofi yakakusangana newe zvakare. Zviri nani kana iwe uchiramba uchitora foni yako uye ugoita mune imwe hurukuro yekukurukura kuti utungamirire hukama huri mberi.
5. Usave uchitaura zvakajeka nezvipfeko zvako
Iwe zvechokwadi hausi kuda kutaridzika sewe iwe wakangobuda kunze kwekurovedza. Kupfekedza chimwe chinhu chaunonzwa uchinetseka. Pfekai zvakanaka uye kupfeka zvakanaka. Iri ndiro zuva rokutanga ramakasarudza kubva kune shuga momma webhusaiti uye iwe zvechokwadi unoda kusimuka zvakanaka pane pfungwa yako shuga momma. Zvakawanda zvekuzarura zvaizoita kuti iwe unzwe kuti iwe unenge wakaita somumvuri uye usingaiti zvakanyanya pakugadzira kuwirirana.
Izvi zvinonzwisisika zvakajeka uye kana iwe uchifunga zvakarongeka uye nouchenjeri, iwe unouya kusvika pakuti izvi ndizvo zvinhu zvaunofanira kudziviswa. Zvisinei, zvinonakidza kuti ruzhinji rwevanhu runozvipira kuzvivi izvo uye zvinoparadza mikana yavo pazuva. Tarisira makadhiiniti mitemo inotaurwa mu blog, ikubatsire kutora zuva rakabudirira.
Posted on July 13, 2018 September 21, 2018 munyori Harsimran KaurTags shuga momma, shuga momma websiteLeave mhinduro on How To Avoid Ruining Your Date: An Important Guide
Girapi Tsvene Kumoyo Womukadzi - A Muchidimbu
Wati wambozvibvunza here kuti chii icho mukadzi anoda zvechokwadi murume wake? Muiti akadira moyo wake achigadzira ichi chisikwa chakaisvonaka. Akabatanidza zvese izvo izvo munhu anonyatsoda. Ndiye mucheri, anopa, mudikanwi anodikanwa, shamwari uye pamusoro pezvose - mupoti. Kunyange Shakespeare anonyatsorondedzera Marie Claire neboka revamwe vanhukadzikadzi mukusika kwake.
Kana uri kutsvaga mweya unobatana pamusikana amai dating site, unofanira kuziva kuti woo mukadzi. Pano mubhuku rino re blog, vakataura dzimwe nzira dzakatema uye nzira dzekukunda mwoyo wake. Iwe uchange uine chiremba wekufambisa iwe pachako, kana iwe wapedza kuburikidza nekunyora-up. Saka, kuripa hanya nekuita zvakanyanya.
Huwandu hwevarume havatauri kunyanya kuratidza maitiro avo. Zvisinei, iyo haisi iyo mhombwe nemukadzi. Aizokutarisa uye ochecherera kune imwe neimwe tsanangudzo yekupfeka kwako. Saka, kuchenjera kupfeka zvakanaka uye kubvisa ndebvu dzako. Sarudza chitubu chakanaka uye iva nechokwadi chokuti unhu hwekunaka. Uyezve, chengetedza zvidonha zvakasviba kana pane. Chinangwa chako ndechokutarisa zvakanaka uye kuva munhu wakachena.
Usaita chero kuitika kamwe kamwe
Kazhinji pane zvisiri izvo, zvinosanganisira nengozi yakakwana yezvengozi kana zvasvika pakusangana nemusingazivi kwekutanga. Ichokwadi, ari mutorwa kwauri pakutanga kwemazuva. Gare gare, kunyange zvakadaro, mufananidzo unotanga kuchinja sezvo iwe vaviri iwe unowedzera hukama. Tora nguva uye uite kuti aite zvekukurukurirana iwe kana zvinyorwa kana mazwi, usati wamukumbira kunze kwezuva. Mutore iwe mukutenda kwako uye kana iwe wakaziva unonyatsoziva kuti iwe uchaita musoro, famba uende naye kumubvunza.
Hungry imbwa dzisina kumbodya
Mikana ndiyo inotyisa uye iwe une marudzi ose emafungiro mupfungwa dzako kumupa pfungwa-inopera kanagasm. Chimira .. tora mabhiza ako kwechipiri. Usatarisira kuti chimwe chinhu chichaitika musi wekutanga. Kunze kwega, tora danho uye uite kuti aite pane zvaunofarira uye zvinokuvaraidza. Ita ziso uye usaita zvisingaiti zvachose. Zviri pachena kuti iwe uchawana mukana wako wekutora asi haufaniri kufamba zvisiri nyore, kunze kwekuti iwe uchida kuparadza zvose uye kurasikirwa muguruva.
Isa zuva panzvimbo yevanhu
Iwe zvechokwadi unoda kuti iye anzwe akachengeteka uye akachengeteka. Nokuda kwechinhu ichocho, kumubvunza uye simbisa kana ari kusvika panzvimbo yakatarwa. Yeuka, chinhu chako chekutanga ndiko kuita kuti mudzimai wako anzwe akachengeteka. Zvakakosha kuti imi vaviri munofanira kufamba muchidimbu mumazuva mashomanana ekutanga. Uyewo, usakanganwa kumushevedza uye kusimbisa kana asvika kumusha akachengeteka. Kana iwe wakatevera zvose zvakanyatsonaka uye ukaita danho rimwe nerimwe nekuchenjera, wakabudirira kuisa hwaro hwehukama.
Kudanana kunofadza uye kunonyanya kukosha imwe yenzira dzakanakisisa dzekuziva kana iwe iwe kana iwe kwete iwe pachako uchatungamidza uye huenderane. Sugar mama dating site rine mazita akawanda evakadzi vachitarisa mweya. Iyi portal inokupa marudzi ose ezvirongwa maererano neunofarira. Tarisira ichi chikamu chekunyorera, chichakubatsira iwe kuti uite hukama hwehupenyu nehupenyu hwako hwemashuga.
Posted on July 12, 2018 September 21, 2018 munyori Harsimran KaurTags sugar mama dating, shuga amai dating siteLeave mhinduro on Holy Grail To A Woman’s Heart – A Synopsis